Ilungelo elilodwa lomenzi kwi-Apple Watch enxibelelana ne-ID yobuso | IPhone iindaba
Akukho mathandabuzo okuba iApple ivavanya amanzi ukuze iphumeze i-ID yobuso kwizixhobo ezibaluleke kubo njenge-Apple Watch. Nayiphi na inkqubela phambili kubo iya kwamkelwa ngamawaka abasebenzisi ukuba namhlanje ubonise ngokucacileyo umdla kunye nokusetyenziswa kweApple Watch yonke imihla.
Ukuba ne-ID yobuso kunye ne-smart straps kwi-Apple Watch yezizukulwana ezizayo yinto esele siyibonile ixesha elithile kumarhe nakwimalungelo abenzi abanjengale anikwe inkampani yaseCupertino kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo. Ngaba oku kuthetha ukuba kungekudala siza kubona iApple Watch eneentambo ezinobuchule kunye ne-ID yobuso?
Impendulo yalo mbuzo iyathandabuzeka, kuba la malungelo abenzi asebenza ngaphezulu kokumiliselwa kwezi teknoloji kwiibheji. Kwa-Apple, njengoko sonke sisazi, ziingcali ekunikezeleni patent zonke iintlobo zezinto kwaye ngeli xesha Bavume nje ukubhekisa kwimitya enomdla kunye nekhamera enokwenzeka kwiscreen sesixhobo. Oku kunokuthetha ikhamera okanye ikhamera ukuvula i-Apple Watch, i-ID yobuso.
Njengoko sisitsho kumajelo eendaba, siyangxama ukwenza izigqibo zethu kolu hlobo lweelungelo lobunikazi kwaye siphupha ngokufika kolu hlobo lwento intsha kwizixhobo, kodwa ke kufuneka zenziwe kwaye oku kuyinkimbinkimbi zizinto ezininzi, eyona iphambili ngenxa yobungakanani uqobo bezinto eziyimfuneko nangona zincinci, ngekhe zanele ukulingana iwotshi okanye umtya. Kude oku kuphunyezwe ngokupheleleyo, siyathandabuza ukuba iApple iyakukhupha into enje ngesixhobo sayo esinxibayo. Itekhnoloji yokuvelisa inzwa, siya kubona ukuba ngenye imini sinalo olu phuculo banelungelo elilodwa lomenzi e-Apple kwi-Apple Watch yabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Ilungelo elilodwa lomenzi kwi-Apple Watch ikhonkco kwi-ID yobuso